China Chlorinated Polyethylene maka PVC ngwaahịa na-emepụta na soplaya |Dehua
Chlorinated polyethylene (CPE) bụ ihe dị elu molekụla polymer ihe emere site na HDPE site na chlorination site na usoro mmiri, na usoro pụrụ iche nke molekul dị elu na-enye ngwaahịa ahụ zuru oke nke anụ ahụ na kemịkal.
Dị ka ngwa nke CPE, anyị na-ekewa ha abụọ dị iche iche: CPE na CM, na izute mkpa nke ndị ahịa, n'ihi na onye ọ bụla otu anyị mepụtara ọtụtụ ụdị dị iche iche teknụzụ indexes.
Ngwaahịa plastik nkịtị:
Ngwaahịa CPE bụ ụdị mgbanwe mgbanwe mmetụta bara uru, nke a na-ejikarị na nhazi nke ngwaahịa siri ike na nke dị nro, dị ka profaịlụ PVC siri ike, ọkpọkọ, ọkpọkọ ọkpọkọ na panel.CPE nwere ike ịkwalite ike mmetụta nke ngwaahịa PVC emechara.
Ngwaahịa dị nro:
Dị ka elastomer zuru oke, enwere ike iji CM mepụta ngwaahịa rọba dị nro.
CPE nwere ikike ndochi dị elu site na ferrite magnetik ntụ ntụ, ngwaahịa rọba magnet nke emere na ya ga-enwe ezigbo mgbanwe okpomọkụ dị ala, enwere ike iji ya mee ihe dị ka mpempe mkpuchi friji, kaadị magnetik na wdg.
ABS na-eguzogide ọkụ
CPE n'onwe ya nwere chlorine, ma nwe ya na ire ọkụ retardant, na-etinye na usoro nke ire ọkụ na-eguzogide ABS, Na-agbakwụnye ụfọdụ CPE na fomulation nke ABS, ọ bụghị nanị na nwere ike igbochi si ọnwụ nke anụ ahụ Njirimara mere site na-agbakwunye ukwuu inorganic ire ere retardant, kamakwa. nwere ike welie ọkụ na-eguzogide na dum usoro.
Anyị ụlọ ọrụ kwụsie ike na-enye asatọ ot akara ule nke CPE, nke na-ekpuchi dị iche iche molekul arọ, chlorine ọdịnaya na crystallinity, nke mere na anyị nwere ike izute mkpa nke ọtụtụ ọkachamara ahịa.
Ọdịnaya Chlorine % 35±2 35±2 35±2 35±2 36±1 35±2 35±2 41±1 25±1 25±1
Okpomọkụ nke Fusion J/g ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 20-40
Oke ike ike A ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤70
Ike ọdụdọ Mpa ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥6.0 ≥6.0 ≥8.0 ≥8.0
Elongation na ezumike % ≥700 ≥700 ≥700 ≥700 ≥700 ≥700 ≥600 ≥500 ≥700 ≥600
Ọdịnaya na-agbanwe agbanwe % ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.60 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.60 ≤0.40
Ihe fọdụrụ na Sieve (ntupu iri abụọ) % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
Ihe ndị na-abụghị ígwè PC/100g ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤20 ≤40 ≤40 ≤40
MI21.6190 ℃ g/10 nkeji 2.0-3.0 3.0-4.0 5.0-7.0
Ọ nwere oke molekụla kachasị elu, nkesa arọ molekụla dị warara na akụrụngwa akụrụngwa dị mma, ejiri ya maka ngwaahịa PVC siri ike na ọkara dị nro. PVC window profaịlụ, nsu, ọkpọkọ, osisi na ụlọ apịaji efere wdg.
Na ịdị arọ molekụla dị elu yana nkesa ịdị arọ molekụla dabara adaba, yana dịka Tyrin 7000. PVC window profaịlụ, nsu, ọkpọkọ, osisi na ụlọ apịaji efere wdg.
Site na ịdị arọ molekụla dabara adaba na nkesa ịdị arọ molekụla obosara, ọsịsọ plasticizing ọkara. Ngwa ngwa extrusion nke PVC window profaịlụ.
Site na ịdị arọ molekụla dabara adaba yana nkesa ịdị arọ molekụla sara mbara, na-eme ngwa ngwa plasta. Ngwa ngwa extrusion nke PVC window profaịlụ.
Nkịtị molekụla arọ na a warara molekul arọ nkesa, na plasticizing bụ ngwa ngwa, na ọ bụ yiri Tyrin3615P. PVC window profaịlụ, ọkpọkọ, injection oyiyi akwa na naanị ihe wdg.
Arọ molekụla dị ala na nkesa arọ molekụla dị warara, ọ dịkwa ka Tyrin6000. Ihe nkiri, profaịlụ, akara akara na naanị wdg.
Obere molekul arọ na crystallinity, ọ nwere ezi ndakọrịta na ABS, na ọ bụ na kasị mma flowability, na-eji ihe nlereanya ngwaahịa, nwere ike melite ire ọkụ iguzogide na mmetụta siri ike.
Maka ogige ABS na-eguzogide ọkụ.
Arọ molekụla dị ala na kristal dị ala Ihe nkiri PVC na mpempe akwụkwọ.
Ọdịnaya chlorinate dị ala na kristal, ọ dịkwa ka Tyrin2500P. PVC window profaịlụ, nsu, ọkpọkọ, osisi wdg
Ọdịnaya chlorinate dị ala na kristal dị elu, ọ nwere ezigbo ndakọrịta na plastik ebumnuche izugbe, dịka ọmụmaatụ PE. Melite arụmọrụ plasticization nke rọba ma welie nguzogide ịka nká, dị ka nguzogide okpomọkụ dị ala na nguzogide ozone.
Nke gara aga: Ọnụ ahịa N'ogbe China Waterproof Floor Paint For Concrete - Spray Polyurea Elastomer (SPUA) - Dehua
Osote: Polyethylene Chlorinated maka Ngwaahịa Igwe Ọdụdọ